တရုတ် 1000V နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအကာအကွယ်ပေးရေးကိရိယာ Arrester DC SPD စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ထင်း
ဝင်ရိုးစွန်းအမှတ် .: 2P, 3P
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: DC က 500V, 800V, 1000V
~ Imax တွင်စီးဆင်းသောလက်ရှိ (8 / 20s): 20kA ~ 40kA
Voltage protective level Up: ~ 3.6KV
DC Surge Arrester SPD 2P၊ 3P ၏အားသာချက်များ
၁။ မြင့်မားသောမြင့်မားသောspရိယာအသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုံခြုံစိတ်ချရသောစူပါကျယ်ပြန့်သောလျှပ်စစ်အကွာအဝေးနှင့် creepage အကွာအဝေး၊
2. အဘယ်သူမျှမဝန်လက်ရှိစဉ်းစားသည်, plug and ဆွဲဒီဇိုင်းကိုအစားထိုးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်
၃။ ပါ ၀ င်သည့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်နည်းပညာ၊ မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်၊
4. ပြတင်းပေါက်၏အစိမ်းရောင်အရောင်သည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးအနီရောင်ကပျက်ကွက်ခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ခွဲခြားရန်လွယ်ကူသည်။
6. မြင့်မားသောအလုပ်လုပ်ဗို့အား, မြင့်သော pass စီးဆင်းမှု, မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု။
၇။ photovoltaic (PV) စနစ်၏မြင့်မားသောကာကွယ်မှုအတွက်
၈။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများသည်မြင့်မားသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွမ်းရည်ရှိသည့်သတ္တုအောက်ဆိုဒ် vristor အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
၉။ Low residual voltage နှင့် quick response
10. ယုံကြည်စိတ်ချရသောထိန်းချုပ်မှု Thermo Dynamic Control disconnector ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ထိန်းချုပ်မှုကိရိယာအတွက်ဝေးလံခေါင်သီအချက်ပြအဆက်အသွယ်နှင့်အတူ 11 ။
13. ကာကွယ်မှု mode ကို: L + / L- - PE ။
DC Protective Arrester ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ DC SPD 2P, 3P
ဝင်ရိုးစွန်းအမှတ် 2P, 3P
Max.Continuous operating Voltage (uc) ~ 1000V, DC
အမည်ခံထုတ်ကုန်လက်ရှိ (8 / 20s) (ခုနှစ်တွင်) 20kA
မက်စ် စီးဆင်းမှုလက်ရှိ (8 / 20s) (Imax ။ ) 40kA
In တွင်ရှိသော Voltage protective level CM / DM ~ 3.6KV
အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် -40 ℃ ~ + 80 ℃
ယိုယွင်းပျက်စီးစေညွှန်ပြ အစိမ်း (ပုံမှန်)၊ အနီရောင် (ချွတ်ယွင်းချက်)
DC Protective Arrester DC SPD 2P၊ 3P ပုံဆွဲခြင်း
ရှေ့သို့ ဆိုလာ PV Circuit Breaker DC1000V DC550V DC800V DC MCB 6A မှ 63A သို့
နောက်တစ်ခု: Solar PV Array အတွက် 1000V 32A ရေစိုခံ DC Isolator Switch
DC က arrester
arrester အလင်းရောင် DC
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး DC arrester
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး DC က SPD